श्रीमती ७ प्रकारका हुन्छन्, तपाई कस्ती ? या तपाईकी श्रीमती कुन वर्गकी ? – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /Intresting/श्रीमती ७ प्रकारका हुन्छन्, तपाई कस्ती ? या तपाईकी श्रीमती कुन वर्गकी ?
जन्मियो टा’उ’को नभएको ब’च्चा: यस्तो अ’चम्म’को ब’च्चा’लाई हेर्नेको घुइँचो